င ဝန် န ဒီ: January 2013
မန်းရေနံ မြေ ပတ်ဝန်းကျင်
မန်းရေနံ မြေ ပတ်ဝန်းကျင် က ပြဿနာ လေး တွေ ရေးလာတာ တွေ့ လာတော့ အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်လာတော့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ က သေးသေးလေး ကို ဖြေရှင်းနည်း ရိုးရိုး လေး ကို အကျယ်တဝင့်ရေးတာ တွေ့ ရလို့ ပါ
ရေနံတွေ စီး လို့ ဖြစ်တာ ကို တကယ်တော့ ဆယ်လာခတ်သူတွေ ဖြေရှင်း နေကျ ကိစ္စ လေး ပါ
အဲဒါ အပြင် တခြားဖြစ်တတ်တာ ကတော့ ရေနံ ခိုးသူတွေ စည်းကမ်းမဲ့ အမြန်လုပ်ရင်း အဖိတ်အစင်ရှိတတ်တာပါ
ရေနံခိုးသူမှာတော့ ဒီလို ဘယ်တွေးပါမလဲ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ တခါတလေ ဖြစ်တတ်တာပါ ချက်ချင်းသိတာနဲ့ယိုဖိတ်တာရှိရင် ပြန်ပြင်စရာရှိတာ ပြင်လိုက်ပိတ်လိုက် ရင် ဖြစ်သွားပါတယ်
ဘာမှ မဟုတ်တာလေး ကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်း လို့ ရတတ်ပါတယ်
ရေနံ မြေ ဝန်းကျင် ဆိုလို့ ရေးချင်တာ က ရေနံမြေဝန်း ကျင် ဆိုတာ တကယ်တော့ တားမြစ် ဝန်းကျင် ကများပါတယ် ညဘက် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မရှိတာ တို့ က ပုံမှန် လုံခြုံရေး အရပါ
ရေနံမြေ ဝန်းကျင်မှာ ပုံမှန် အရဆိုရင် မြေယာတွေ လျော်ကြေးပေး ပြီး ရေနံ ကို ပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ် နည်းအောင် ထုတ်ရတာပါ
ရေနံ မြေ ဝန်းကျင် ဆိုလို့ယာခင်းထဲ တို့လယ်ယာမြေဝန်းကျင် တို့ မှာ ရေနံထုတ်တာတွေ ဆိုတော့ တခုခု ဆို အမျိုးမျိုးတွေးတာတော့ ရှိမှာပေါ့ မန်းရေနံ မြေ မှာ အလုပ်လုပ်တုန်း က ဆို မန်းချောင်း ကိုကျော် ပြီး ယာခင်းတွေ ဖြတ် ပြီး Reopen Well တွေ လုပ်ရတော့ ရေနံ တွင်းဝတွေ ကို ခဲတွေ အမှိုက်တွေ ပစ်ချထားတော့ အချိန် ယူပြီး ပြန်လုပ်ရတာတွေ ရှိ်တာပါ
အဲလို အခါ မှာ တချို့ နေရာတွေ ဆို စေတီပုထိုးတွေ နား ရောက်တာတွေ ပါ။ တခု ထူးခြားတာ ကတော့
အဲလိုညတွေ မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မြွေတွေ့ လို့ ကတော့ ပြဿနာ အနည်းနဲ့ အများ တွေ့ တော့တာပါ
ကိုယ်တွေ့ ကြုံရတာကတော့ တခါ P-82 နဲ့တွင်း ကို ဝင်ပြီး မကြာဘူးတွင်းခြေမှာ မြွေ တွေ့ ပါလေရော အဲလိုနဲ့အလုပ် က အဆင်ပြေစွာ အဲဒီ တွင်းမှာတော့ ပြဿနာ မရှိအောင် သတိထားရင်း လုပ်တာ ပြီးသွားတာနဲ့ တွင်းရွေ့ မယ် လုပ်တော့ မှ ပြဿနာ တတ်ပါလေရော ညသန်းခေါင်ကျော် ၁ နာရီကျော် ၂ နာရီလောက်ရောက်တော့ P-82 ကို ရွေ့ တော့ ညအစောပိုင်းလေး က မိုးဖွဲဖွဲလေး ရွာထားတော့ လမ်းတော့ အနည်းငယ်ချောတော့ ချောနေတာပေါ့
အဲလိုနဲ့ရွေ့ လိုက်တာ ကုန်းဆင်းမှာ P-82 ကြီး တစ်စောင်းနဲ့ လျောပြီး ချော်ကျပါတယ် အဲဒါနဲ့p-82 နောက်က လိုက်နေတဲ့ ကားလည်း ရှေ့ ဆက် သွားမရဖြစ်တော့ နောက်ပြန်ဆုတ် ပြီး မင်းဘူးဘက်ကနေရုံး ပြန်ဖို့လုပ်တော့ မင်းဘူး ကို အထွက် လမ်းမှာ နွံနစ်ပြီး ကားလေးပါ ဆက်သွားမရ မင်းဘူး မြို့ ထဲ ကို လမ်း နည်းနည်းလျှောက် ပြီးတော့ ကားမောင်းသမား ကို အသိ တစ်ယောက်ဆီက စက်ဘီး ငှား ပြီး ရုံးပြန်သွား ကားလေးပြန်ဆွဲ လုပ်တာနဲ့ မနက် မိုးလင်း စည်းဝေးခန်း ကို ရောက်ရောပဲ
မှတ်မှတ်ရရ မန်းရေနံမြေ မှာ မြွေ တွေ့ လို့ ကတော့ ဖြစ်တာလေးကို သတိတရနဲ့ 
နောက် တစ်ခါ က ရေနံတွင်းတွေ Service လုပ်တာ မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ က အထိတ်တလန့် လုပ်ရတဲ့နေ့ ပေါ့
ရေနံတွင်း မင်းဘူးမြို့ ရဲ့ဂေါက်ကွင်းထဲမှာ ကိုး
ဂေါက်သီးရိုက်တဲ့သူတွေနဲ့RIG ကြီး က ဂေါက်ကွင်းထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဂေါက်ရိုက်တဲ့သူလည်းစိတ်တော့ညစ်မှာပဲ
အလုပ်လုပ်တဲ့သူကလည်း ဟိုကဂေါက်သီးရိုက်ခါနီးရင် RIG ကို အကာအကွယ်ယူ ရ ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ရနဲ့ ပေါ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူအရပ်နဲ့ သူဇာတ် အဆင် ကိုပြေနေတာပါပဲ ဂေါက်ကွင်းထဲလည်း ရေနံထုတ် ဖို့ လုပ်တာပါပဲ ထုတ်လည်းထုတ်ခဲ့တာပါပဲ။
ဘေးလူတွေ ကဘာပြောမလဲတော့ မသိ အဲဒီတုန်း ကဟုတ်နေတာပါပဲ
အခုတော့ ဟိုကရေးဒီကရေး တာတွေ တွေ့ တော့ Mann Oil and Gas Field Operation Engineerအလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ကို ပြန်ရေးပြရင်း မန်းရေနံမြေ ဝန်းကျင် ကိုထိတွေ့ နားလည်နိုင်ကြပါစေ။
ဂျပန် မှာ ကျောင်းပြီး အလုပ် ရှာသူတွေ ဖြတ်သန်းမှု
ဒီစာ ကို ရေးတာ က မြန်မာပြည် မှာ ဂျပန်စာ တတ်ရင် ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေ ရေးတာ တွေ့ နေရလို့ရေးရတာပါ
စိတ်ပျက်ဖို့ ရေးတာမဟုတ်ပါ ဖြတ်သန်းရဲ တဲ့ စိတ်ဓာတ် မွေး လာနိူင်ဖို့ ပါ
ဂျပန်စာ မတတ်လဲ အလုပ် ကတော့ ရပါတယ် ဂျပန်မှာ ဂျပန်စာမတောက်တခေါက်နဲ့ဖြတ်သန်းနေတာ တပုံကြီးပါ
ဒါပေမဲ့ ဂျပန် မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေ ကို ရေးပြချင်ပါတယ်
ကျောင်းပြီးသူတွေ ကျောင်းပြီး တော့ အလုပ်ရှာပြီး အဆင်မပြေသူတွေ တပုံကြီးပါ အသိတယောက် မွန်ဂို တစ်ယောက်ဆို တနှစ်ကျော်ပါပြီ ကျောင်းပြီး လို့အလုပ်ရှာနေတာ အလုပ်မရရင် စတေးမရှိတော့ လို့မိခင်နိူင်ငံ ပြန်ရတော့မှာပါ
အဲဒါက ကျောင်းပြီး စ အဖြစ် ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေသူကြတော့ အလုပ်က လစာ နည်းလို့ ဆို ပြီး အစပိုင်းနှစ်တွေ ကတော့ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ အလုပ်တွေ ပို ပါးလာ လစာပိုနည်းလာတော့
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး က ဗီဇာ သက်တမ်း ကို တစ်လပဲ တိုးပေးပြီး လစာ နဲ့စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေနိူင်ဘူးဆိုပြီး ပြန်လွတ်တာပါ
ရတဲ့ ဗီဇာ နဲ့လုပ်တဲ့ အလုပ်လွဲနေလို့ပြန်ပို့ တာတွေ ရော ရှိနေတာပါ
ပြန်မပို့ ပဲ အခွင့်အရေး ပေးပြီး အလုပ်ပြောင်းခိုင်းတာတွေ လဲ ရှိပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့ သူရှိသလို မရှိသူတွေ လဲ ရှိပါတယ်
ဂျပန် မှာ အခွန် တွေ ကျန်းမာရေး အတွက် ပေးရတာတွေ ကတော့ ပင်စင် အတွက် တွေ ရှိနေတာပါ
ဂျပန် ရောက်စ ဆိုသူတွေ ကို တရားဝင် အခွန် က တနှစ် အတွင်း ကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဆောင်ရတာပါ
ယန်း သောင်း ၂၀ ကျော် ရသူဆို ယန်း ၅သောင်း ဆောင်ရတာပါ
အဲဒါပြီးတော့ အလုပ်ကဝင်ငွေကောင်းရင် ကောင်းသလို ကျန်းမာရေး အတွက် က ဂျပန်ယန်း ၂သောင်းကျော် တွေ ဆောင်ရတာပါ
နေထိုင်ခွန် တွေ မြို့ နယ်ခွန် တွေ က ယန်း ၈သောင်း ရယ် ယန်း ၁၁ သောင်းကျော် ရယ် ဆောင်ရတာပါ
အဲဒါ ပင်စင် အတွက် မပါသေးပါဘူး
အခွန်က တနှစ် အတွင်းပြီးသွားလို့၂၀ ရာနှုန်းမဆောင် ရလို့ သက်သာသွားမယ် မထင်ပါနဲ့အာမခံတွေ
ဘာတွေ ပင်စင်တွေ အတွက် တနှစ် ကို ယန်း သောင်း ၈၀ လောက် ကို ဆောင်ရတာပါ အဲဒါတွေ က တော်ရုံ ဝင်ငွေ လေး ကို ကောက်တာတွေ ရေးပြတာပါ များရင် များလာသလို ပိုဆောင်ရတာပါ
အဲလိုမဆောင်ချင်ရင်တော့ အမျိုးမျိုးပြောပြီး သက်သာအောင် လုပ်လို့ တော့ ရပါတယ် အခွန်ဆောင်တဲ့ သူကတော့ သူ့ အလုပ်ရှင် က သူ အိုဗာစတေး ဖြစ်တာ ကို ရဲဖမ်းတာ ကို ပြန် ထုတ်ပေးပြီး ဗီဇာ ပြန်လုပ်ပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်တာ ကို လည်း အမျိုးမျိုးတွေ့ ရပါတယ်
အခွန်ဆောင် တော့ နိူင်ငံခြားသား က နိူင်ငံခြားသားလို နေလို့ ရတာပေါ့
ရဲလာရင် ရဲ ရဲ့ကဒ် ကို ပြမှ နိူင်ငံခြားသားကဒ် ကို ပြရတာပါ ရဲ ကို သေချာအောင် မေးမြန်းလို့ ရတာ ဂျပန် မှာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လောကမှာ အခက်အခဲလေးတွေ ဖြတ်သန်းရင် ကြီးပြင်းရတာ ပျင်းစရာမကောင်းဘူးပေါ့
အခက်အခဲဆိုတာ ခဏပါ အချိန်တန် ဖြတ်ပြီးသွားတာရယ် ကျော်သွားလို့ ရတာရယ်ပါ
နည်းတွေ ရှိနေပါတယ် နည်းလမ်းသိပြီး ဖြတ်သန်းနိူင်ကြပါစေ။
Western Union Agent ကို တင်ပေးတာ စာရွက်ဖြည့် ချက်ချင်းပို့ လို့ ရ
မြန်မာပြည် ကို Western Union ကနေငွေလွဲ ရတယ် ကြားတော့ Seven Eleven ကနေ သွားမေးတော့ Seven Bank ကို တခါ ဖုန်းဆက် ပြီးရင် အကောင့် ဖွင့် ချက်ချင်း မရတာနဲ့ စိတ်ပျက်သွားပြီး သူများတွေလဲ အဲလို မဖြစ်အောင် တင်ပေးတာပါ
ပြီးတော့ ဂျပန် က အဲလို အဆင့်တွေ ခံလာရင် ပိုက်ဆံ ပို ဖြတ်ခံ ရပါတယ်
အွန်လိုင်းမှာ ခရက်ဒစ်ကဒ် ကိုတောင်း တဆင့်ခံ ပိုက်ဆံ ဖြတ်စားတာတွေ ရှိပါတယ်
ဘဏ်ကနေ အွန်လိုင်း ပိုက်ဆံ သွင်း စတာ ကို လည်း ကန့်သတ်ထား ပါတယ်
တချို့ ဘဏ် ဆို နိူင်ငံကျော် ပိုက်ဆံ သွင်း စတာ လုပ်ပြီးနောက် ပိုင်း အွန်လိုင်း ပိုက်ဆံ သွင်း တာ ပိတ် ကို ပစ်လိုက်တာ တွေ့ ရပါတယ်
တကယ်တော့ ဂျပန် က သူငွေ ကြေး ကို စနစ် တကျ ထိန်း ချုပ် ထား တာ ပါ
ဒါပေမဲ့ ဂျပန် ယန်း သောင်း ၈၀ ကျော် ရင် သာ အခွန် ကိစ္စ တွေ ဘာ တွေ ရှိတာပါ မူဘောင်ထဲ မှာ ကိုယ် မှန်တယ် ဆို ဘာ ပြဿနာ မှ မရှိပါဘူး
မြန်မာ တွေ ငွေလွယ်လွယ် ကူကူ လွဲ ရဖို့ ရေးလိုက်တာပါ
ငွေလွဲ ရင် ငွေလွဲ ခယန်း ၂၀၀၀ ကနေ အစားစား များရင် များသလို ယန်း ၁၀ သောင်း တတ်မှ ယန်း ၁၀၀၀ လောက် ပိုပေး ရတာဆိုတော့ သက်သာပါတယ်
စင်ကာပူ ဆို ရင် ဈေး က ယန်းတစ်ထောင် ဈေးပို ကြီးပါတယ်
မြန်မာ က သက်သာတဲ့ နိူင်ငံထဲမှာ ပါနေလို့ သက်သာ နေတာပါ။Union also makes money from currency exchange. Subject to applicable taxes, if any.
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:08 AM No comments:
မြန်ပြည် ငွေလွဲ လိုသူတွေ အတွက် ဂျပန်မှာ ရှိသော တစ်ချို့ သော Western Union Agent ၅၁ နေရာ
J MARKET IKEBUKURO KITAGUCHIEK
1 287Nishiikebukuro Toshima
Today's Hours: 10:00 - 19:00
Tomorrow's Hours: 10:00 - 19:00
1 TIS SANNOMIYA SHOP
C O Tis Sannomiya Jr Sannomiya
4 1 1 Nunobikicho Chuo Ku
Kobe City, Hyogo 651 0097
Tomorrow's Hours: 10:30 - 18:30
2 YURAKUCHO ITOCIA SHOP
Chiyoda Ku, Tokyo 100 0006
Today's Hours: 10:00 - 19:30
Tomorrow's Hours: 10:00 - 18:30
3 T CAT SHOP
T Cat 3f Hakozakicho42 1 Nihombashi
Chuo Ku, Tokyo 103 0015
Today's Hours: 07:00 - 16:00
Tomorrow's Hours: 07:00 - 16:00
4 SHINJUKU TOUZAITSUURO SHOP
126 Nishishinjuku
Shinjuku Ku, Tokyo 160 0023
Today's Hours: 12:00 - 20:30
Tomorrow's Hours: 11:00 - 20:30
5 TOKYO BRANCH
5th Floor Fukide Bldg41 13 Toranomon
Minato Ku, Tokyo 105 0001
Today's Hours: 09:00 - 15:00
Tomorrow's Hours: 01:00 - 23:59
Saturday: 01:00 - 23:59
Sunday: 01:00 - 23:59
6 LALAPORT TOKYO BAY SHOP
Lalaport Tokyo Bay21 1 Hama Cho
Funabashi City, Chiba 273 8530
Today's Hours: 10:00 - 18:30
7 GOTANDA SHOP
1f Toraya Bldg 152 Nishigotanda
152 Nishigotanda
Shinagawa Ku, Tokyo 141 0031
Tomorrow's Hours: 10:00 - 15:00
8 TRAVELEX KEIKYU KAWASAKI
C/O Keikyu Kawasaki Station
9 SHINJUKU MINAMIGUCHI SHOP
1f Shinjukuminamiguchi Bldg
2 85Yoyogi
Shibuya Ku, Tokyo 151 0053
10 TRAVELEX HAMAMATSU MAY ONE
6-1 Sunayama-Cho, Naka-Ku
Hamamatsu, Shizuoka 430-0926
Today's Hours: 11:00 - 19:00
Tomorrow's Hours: 11:00 - 19:00
11 TRAVELEX KYOTO SHIJO
C O Nippon Travel Agency
Nissei Shijo Yanaginobamba Bldg
Shimogyo Ku Kyoto City Kyoto, Shimogyo Ku Kyoto City Kyoto 600-8006
Today's Hours: 11:00 - 18:30
Tomorrow's Hours: 11:00 - 18:30
12 HIBIYA SHOP
Toho Towin Tower 1f 152 Yurakucho
13 KANDA HIGASIGUCHI SHOP
1f Koukashitaichibangaikyodo Bldg
Tomorrow's Hours: 10:00 - 15:30
14 IKEBUKURO NISHIGUCHI SHOP
Livic Ono Bldg 1f
1 213Nishi Ikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 171 0021
Tomorrow's Hours: 11:00 - 17:30
15 SAPPORO SHOP
Sapporochuo Bldg33 Kita 1 Jo Nishi
Sapporo City, Hokkaido 060 0001
Today's Hours: 10:30 - 18:30
16 AQUA CITY ODAIBA SHOP
4floor Aqua City Odaiba 171 Daiba
Minato Ku, Tokyo 135 8707
17 SHIBUYA CENTER GAI SHOP
2f Riemu Bldg 23 11 Udagawa Cho
23 11 Udagawa Cho
Shibuya Ku, Tokyo 150 0042
Today's Hours: 11:00 - 20:00
18 SHINJUKU MINAMIGUCHI SHOP
2 109Yoyogi
1f Homma Building
19 YOKOHAMA VIVRE MAE SHOP
2714 Minamisaiwai Nishi Ku
Yokohama City, Kanagawa 220 0005
Today's Hours: 10:30 - 19:30
20 SENDAI SHOP
1st Floor Ever I Building
2 1 27 Chuo Aoba Ku
Sendai City, Miyagi 980 0021
21 SUITENGU SHOP
1f Oshima Bldg 1 15 4
Chuo Ku, Tokyo 103 0013
Today's Hours: 09:30 - 18:30
22 MACHIDA SHOP
1f Machidacenter Bldg68 1 Haramachida
6 8 1 Haramachida
Machida City, Tokyo 194 0013
23 SAPPORO MONEY TRANSFER PLAZA
Asty 45 Bldg 1f
5 1 Kitayonjyo Nishi Chuo Ku
Sapporo City, Hokkaido 060 0004
24 DIVER CITY TOKYO PLAZA
1f Diver City Tokyo Plaza 1 1 10 Aomi
1f Diver City Tokyo Plaza
Koto Ku, Tokyo 135 0064
Today's Hours: 10:00 - 21:00
Tomorrow's Hours: 10:00 - 21:00
25 SHINBASHI KARASUMORIGUCHI SHOP
1f New Shimbashi Bldg216 1 Shimbashi
2 16 1 Shimbashi
Minato Ku, Tokyo 105 0004
26 FUKUOKA TENJIN NISHI DORI SHOP
Tenjin 27 Bldg 1f279Tenjin
2-7-9 Tenjin Chuo-Ku
Fukuoka City, Fukuoka 810 0001
27 NAGOYA SAKAE MONEY TRANSFER PLAZA
2f Chunichi Building
4 1 1 Sakae Naka Ku
Nagoya City, Aichi 460 0008
28 SHINJUKU MONEY TRANSFER PLAZA
Asp Nishi Shinjuku Bldg 2f
7 112Nishi Shinjuku
29 YOKOHAMA MONEY TRANSFER PLAZA
2 19 12 Takashima Nishiku
Yokohama City, Kanagawa 220 0011
30 OTEMACHI SHOP
1st Floor Shin Otemachi Building
221 Otemachi
Chiyoda Ku, Tokyo 100 0004
31 KASUKABE SHOP
8 8 11 Chuo
Kasukabe City, Saitama 730 0035
Today's Hours: 11:00 - 19:30
Tomorrow's Hours: 10:00 - 19:30
32 TOKYO EKI MAE SHOP
1f The 2nd Daikoku Bldg 1619 Yaesu
1619 Yaesu
Chuo Ku, Tokyo 103 0028
33 IKEBUKURO BRAND KAN SHOP
Okayasuen Bldg 1 13 10 Higashiikebukuro
1 13 10 Higashiikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 170 0013
34 TRAVELEX AKASAKA MITSUKE
1f Akasaka Long Beach Bldg
35 IKEBUKURO SEIBU MAE SHOP
B1f Asahiyakkyoku Bldg
1 22 1 Minamiikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 171 0022
36 NAGOYA SUB BRANCH
7th Floor Jpr Nagoya Sakae Bldg
3 24 24 Nishiki Naka Ku
Nagoya City, Aichi 460 0003
37 TIS KYOTO SHOP
C O Tis Kyoto Jr Kyoto Station
Higashi Shio Koji Cho Shiokoji Kudaru
Kyoto City, Kyoto 600 8216
38 IKEBUKURO SHOP
1f Kashiwaya Bldg
1 86Higashiikebukuro
39 AKIHABARA SHOP
Akihabaraiematsu Bldg 1 117Sotokanda
1 117Sotokanda
Chiyoda Ku, Tokyo 101 0021
40 NANKAI NAMBA SHOP
C O Nankai Intl Travel 2nd Fl Premises
Of Nankai Namba Stn51 60 Namba Chuo Ku
Osaka City, Osaka 542 0076
41 YOKOHAMA MORE S MAE SHOP
2f Kyoritsu Bldg 123 Minamisaiwai
42 IKEBUKURO GREEN ODORI SHOP
Sanka Bldg 1 13Higashiikebukuro
1 13Higashiikebukuro
43 NAGOYA EKI MAE SHOP
Within Eatin Street B1 Meitetsu Hyakka
Ten Mens Kan 121 Meieki Nakamura Ku
Nagoya City, Aichi 450 8505
44 NAMBA SHOP
1f The 3rd Ks Bldg32 26 Namba
45 OKACHIMACHI SHOP
422 Ueno
Taito Ku, Tokyo 110 0005
46 YAESU SHOP
Yaesu Shopping Mall No4Yaesu21
Chuo Ku, Tokyo 104 0028
47 SOUTHGATE SHINJUKU SHOP
5 33 8 Sendagaya
Shibuya Ku, Tokyo 151 0051
48 UENO MONEY TRANSFER PLAZA
C O Keisei Railways Keisei Ueno Station
1 60 Ueno Koen
Taito Ku, Tokyo 110 0007
49 SHINJUKU OMOIDEYOKOCHO SHOP
1211 Nishishinjuku
50 SHIODOME NIHON TV PLAZA
B2 Nippon Tv Tower
161 Higashi Shimbashi
Minato Ku, Tokyo 105 0021
Western Union ကနေ ငွေလွဲ တာ အရင်က သောင်း ၇၀ ရပြီး အေးဂျင့် လိပ်စာတွေ ရှာမတွေ့Error တတ်နေသည် Seven Bank ဆို အကောင့်ဖွင့်ရန်လို
အရင် က အေ့ဂျင့် ကို ရှာရင်
We're sorry that service is currently unavailable
If the problem persists, please call one of our Customer Service Representatives at 1-877-989-3268 and give them this reference code:
Seven Bank Account ကဆို အကောင့်ဖွင့်တာနဲ့ ကြာတတ်ပါတယ် အဆင့်ဆင့် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။Takadanobaba မှာ ရှိတဲ့ Western Union agent က အလုပ်တတ်ရက် ဆို ညနေ ၆နာရီ အထိ ရပါတယ်
HIS မှာ လည်း ငွေလွဲလို့ ရပါတယ် လို့ ရေးထားပေမဲ့ ညနေ ၄ နာရီ အထိ ပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့agent ကနေ ငွေလွဲ ရင် စာရွက် အခုဖြည့် အခုပို့နာရီဝက် မကြာပါဘူးရောက်ရမှာပါ။
ဂျပန်မှာ ကျောင်းပြီး အလုပ်လုပ် အလုပ်ပါမစ် နဲ့ နေသူ တစေ့တစောင်း
ခဏ ဆိုလို့ 
မိမိ ကိုယ် ပြောလျှင် မခံနိူင်
ဖမ်းမယ်ဆီးမယ် အရေးယူမယ် အတွေးပဲ ရှိသူ
လူများပြောမှသိ အများအတွက် အကျိုးပြုမှု ဘာလုပ်နေလဲ ကြည့် ရင် ထူးလာတာ မတွေ့ 
ငါလုပ်တာ အမှန်ထင်သူ အပြောမခံ နိူင်သူ က လူကြီး လူကောင်း ဖြစ် မလာ
အရေးယူဖို့အတွေးဟောင်းသာရှိ
သတင်း တခု လွတ်တော် ကို ရောက် ဝမ်းသာစရာ ပါ
တခုခုဆို မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် တာ ကို လည်း ကြိုဆိုစရာပါ
ရေးတဲ့ သူ တော့ သူ့ စာ ကို လွတ်တော် အထိ ရောက်ပြီ ဆိုတော့ တော်တော် ဝမ်းသာနေမှာပေါ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခု ခု မှားရေး လို့ မရအောင် အင်တာနက် ဥပဒေပေါ်လာ တော့မှာပေါ့
ဖမ်းမယ်ဆီးမယ် ဥပဒေက တော့ လွယ်မယ်ထင်ပါရဲ့ 
အင်တာနက် ကလည်း ကိုယ်ပိုင် ဂြိုလ်တု ငယ် ကို ဝယ် သတင်း တွေ ကို စုံစမ်းလို့ ရသလို ချိစ် အပြားလေး အသုံးချပြီး လေ့လာ လို့ ရသလို
ဘယ်သူ ဘယ်ကို သွားတယ် ဘယ်မှာ ရှိတယ် ကအစ သိနေတာ ပါ
ခရက်ဒစ်ကဒ် တွေ ဆို လိုက်ကြည့် စရာမလို ဘယ်နေရာမှာ သုံးတာနဲ့သုံးနေတဲ့ ကုဒ်တွေ ကို စစ်ဆေးလို့ ရတာပါ
ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ့ လုပ်တာ
ဘယ်ကလပ်မှာ ဘယ်သူ ဘာလုပ်တာ ကို လူရောက်မှ သတင်းရတဲ့ ခေတ် မဟုတ်တော့ပါဘူး
အင်တာနက် က နေရာကျဉ်းအောင် လုပ်သလို
စာရင်းဇယားတွေ ဒေတာ တွေ ထက် အပေါ်စီးကနေ ကြည့် လို့ရတာ ကို ဘယ် သူတွေ ဘယ်လို လုပ်ပြီး
ဘယ်ဥပဒေ က ဖွင့်မချရင် မသိ နိူင် အောင် ထားထားရင် ဘယ်သူမှ မသိ နိူင်သလို ဘာမှ ကို လုပ်လို့ကိုး မရတာပါ
ဘယ်ဖုန်းက ဘယ်နေရာ ဘယ်ကွန်ပျူတာ က ဘယ်အိမ် ဘယ်လိပ်စာ
ဘာကြည့်နေတာ က အစသိလို့ရတာ အင်တာနက်ပါ
၂၀၀၄ က ကွန်ပျူတာ ထဲ ဝင်ကြည့် တာ ဆာဗာ့ လုပ်တာ အခုနောက်တော့
((ဟက်ကာထက်သာတာ. ဂြိုလ်တု အငယ်စားတကိုယ်တည်း သုံးလို့ ရတဲ့ ဂြိုလ်တု ပါ ရောင်းတဲ့ သူ ရှိပါတယ်
အဲတာထက်သာတာ ချိစ်ပြား လေး
အဲတာတွေ ကို သိတဲ့ အသိပညာက လူ ဆိုတာတွေ ကို သိနိူင်ကြပါစေ))
မြန်ပြည် ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင် ဖြစ်ဖို့ ထက် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ရသင့်တာတွေ ရဖို့ 
မြန်ပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ထူးလာတာတွေ ရှိလာသလို ရဖို့ တွေတောင်းရင်း အရင် က မြေသိမ်း လယ်ယာသိမ်း တာကနေ အခုဆို လူပါ သိမ်းဖို့လမ်းကြောင်း ကြောင်းနေတာ ကို တွေ့ လို့ဒီစာ ကို ရေးရတာပါ
အခုတော့ လူသိမ်းဖို့ 
ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင်ဖြစ်ရေး လုပ်လာတာက တရားဝင် လူသိမ်းရေးပါ
အမျိုးသမီးတွေ လမ်းမှာ ရဲကတွေ့ ရင် နင်မှာ ပြည့်တန်ဆာ လက်မှတ်မပါဘူဆို ဖမ်းမယ်ဆိုရင် လူသိမ်းတာမဟုတ် လို့ ဘာလဲ
လုပ်ငန်းထောင်တဲ့သူကလည်း ပြည့်တန်ဆာတွေ ကို တနေရာထဲမှာ သိမ်းထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်စားရင် လူတွေ ကို ထိန်းသိမ်းပြီး လုပ်စားတာမဟုတ်ပါလား
ဒါဆို လူကို တရားဝင် ထိန်းသိမ်း တာ လူကိုသိမ်းတာပါ
လမ်းသွားလမ်းလာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထဲဆို ဖမ်းပြီး ဆွဲဆောင်ပြီး ခေါ်ပြီး ခေါ်သွားရင် ဘယ်သူ ကာကွယ်ပေးမှာလဲ
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခိုင်းပြီး အပြင်လူတွေ နဲ့ ဝေးအောင်လုပ်ထားပြီး
လူသိမ်းတာကို တရားဝင်လုပ်ချင်သူတွေ ရှိတာ က ပြည်ထဲရေး က ရဲတွေ လား
တရားဝင် ပုံမှန်လာဘ်စားဝင်ငွေ ရဖို့ လား
လူအချင်းချင်း သွေးသား ရောင်းခေါင်းပုံဖြတ် ကို တရားဝင် လုပ်ချင်သူတွေ ကြောင့်လား စီးပွားရေး တွေ လုပ်ရတာစုံလာလို့လူစီးပွားရေး တရားဝင် ရဖို့ ကြိုးစားလာတာလားပေါ့
လူသိမ်းတာ လုပ်ဖို့ ပဲ ကျန်တော့တာ တွေ့ နေရတာပါ
ဒီလိုကိစ္စတွေ ကို တရားဝင် လုပ်ဖို့ ပြောနေသူတွေ ရဲ ကြီးပြင်းမှုတွေ ကို ကြည့်ရင် သူ့ ဘဝ အဖိနှိပ်ခံ အနည်းအများခံရသူတွေ ရယ်
လူကြီးလူကောင်း ဘဝဆိုတာ နားမလည်သေးတာကို တွေ့ ရပါတယ်
လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လို့အထင်ကြီးလို့ မရပါဘူး
ရိုးသားတာရှိချင်ရှိမယ် အတန်းပညာနိမ့် နေတာ ရှိချင်ရှိမယ်
ချမ်းသာတာရှိချင်ရှိမယ် ငွေကြေးမပြေလည်တာရှိချင် ရှိမယ် လူအမျိုးမျိုး ကနေလာတာပါ ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာလည်းရှိနေမှာပါ
ဒီတော့ ပြည်သူတွေ ကနေ အလုံးစုံယုံလို့ မရပါဘူး ပြည်သူတွေ မှာပါတာဝန်ရှိပါတယ်
အခု အဓိက အချက်က ပြည့်တန်ဆာ ကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တာ ကို ကြည့်ရင် အမျိုးသမီးတွေ ကို ရဲတွေ က ပြည့်တန်ဆာ ဆိုပြီး မသင်္ကာရင် ဖမ်းနေတာပါ
ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆိုရင် ရဲဖမ်းလို့ မလွယ်အောင်ရယ် တရားဝင် ဖြစ်အောင်လုပ်ရင် ဆေးစစ်တာတွေ ရောဂါတွေ လျော့နည်းအောင် လုပ်ချင်တာတွေပါ ကျန်တာတွေ အကျိုးရှိတာမတွေ့ ရပါဘူး
ဒီနေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ ကို ရဲ တွေ အချိန်မရွေး ဖမ်းလို့ ရနေတာရယ် အမျိုးသမီးတွေ ကွန်ဒုံး ကိုင်ဆောင်ရင် ဖမ်းလို့ ရတာဆိုတာတွေ က
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လုံးလုံး ဆုံးရှုံးနေတာပါ
တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေ သားဆက်ခြားချင် လို့သွားဝယ်လို့ တောင် ဝယ်လို့ မရတာ ရယ်
အမျိုးသမီး တွေ ကို အမျိုးသားရဲတွေ က မည်သည့်အချိန်မဆို စစ်မေးလို့ ရတာကလည်းမကောင်းမှုဖြစ်အောင် လုပ်နေသလိုရယ် အမျိုးသမီး တွေ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာပါ
အမျိုးသမီး ကိုစစ်မေးဖို့ရဲမေ ရှိဖို့ လိုသလို ရပ်ရွာလူကြီး အပြည့်အစုံ ပါဖို့ လိုတာရယ် အဲလိုမှမပါရင် တရားစွဲဆိုခွင့် တရားဝင် ဖြစ်ရင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးရင် ပြည့်တန်ဆာတရားဝင် ဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေး က အရေးမကြီးနိူင်ပါဘူး
ပြည့်တန်ဆာကို ဖမ်းရင်လည်း တိုင်သူရှိရင် မှ ဖမ်းရင်တောင် ပါသင့်တာတွေ ပါမှရမှာပါ မပါဘဲဖမ်းရင် တရားစွဲခွင့်ရှိရမှာပါ
ဒါပေမဲ့ တကယ်တော့ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု အရဆိုရင် တရားဝင် ဖြစ် ကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ
နောက်တခု က စားဝတ်နေရေး မပြေလည်လို့ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ရှိနေရတာပါ
အဓိက စားဝတ်နေရေး ပြေလည်အောင် ဘယ်လိုကူညီမလဲ စဉ်စားပေးရမှာကို အလွယ်နည်းနဲ့သွေးသားရောင်းစား ကြ လို့ ပြောနေသလိုဖြစ်နေတာပါ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်ပြည် ယဉ်ကျေးမှု အရ ဒီမိုကရေစီ ကို လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ပြီး ရသင့်တာတွေ တောင်းသင့်ပါတယ်
လူသိမ်း တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင်ဖြစ်ရေး ကို မဖြစ်ရေးရယ် အမျိုးသမီး များ ရသင့်သောအခွင့်အရေး ရစေရန် အတွက် ရယ် စားဝတ်နေရေး အတွက် သွေးသား ကို အလွယ် တကူ ရောင်းစားအောင် တွန်းအားပေးသော လူသိမ်း မှာ ကို အားပေးသော လူများကို မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်စေရန် ရေးသားပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:47 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ကျားသီလနှင့် နိူင်ငံသားတိုင်း မိမိ ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်
ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ကြိုဆိုပါတယ်
ကျားသီလ ကို လည်း နားလည်ပါတယ်
နိူင်ငံသား တစ်ယောက် ဆိုတော့
မိမိ ကိုယ် ကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် အတွက် လက်နက် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရသင့်ပါတယ်
၁၉၉၀ ဝန်းကျင် မတိုင်ခင်က မြန်မာ နိူင်ငံသားတွေ မိမိ ကိုယ်ကို ကာကွယ် ပိုင်ခွင့် အရ တရားဝင် လက်နက်ကို လိုင်စင်နဲ့ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရှိပါတယ်
အမှန်တကယ် ကိုင်ဆောင် လို့ ရတာ သက်သေ အထောက်အထားတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်
ငြင်းမရပါဘူး. တပ်မတော်ကမဟုတ် ရဲ မဟုတ် ပြည်သူ့ စစ်မဟုတ် အဖြူရောင်နယ်မြေ မှာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့နောက် မြန်မာပြည်သားတွေ တရားဝင် လိုင်စင်နဲ့လက် နက်ကိုင်ခွင့် ရှိခဲ့ပါတယ်
အခုလည်း တရားမျှတ စွာ နဲ့တပ်မတော် က လက်နက်ကိုင်
ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ ကလည်း လက်နက် ကိုင်
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရ ကလည်း လက်နက်ကိုင် နဲ့ 
မြန်မာ နိုင်ငံသား စစ် စစ် ကလည်း
မိမိ ကိုယ် ကို ကာကွယ် ပိုင်ခွင့် အရ
လက်နက် ကိုင်ခွင့် ရှိဖို့လို ကို လို နေပါပြီ ပြန်လည်ရသင့် နေတာပါ။
မြန်ပြည်သား တွေ မိမိ အခွင့် အရေး မိမိ ကိုယ်တိုင် ရနိူင်ကြပါစေ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:39 AM No comments:
၂၀၁၃ နှစ်သစ် ဖူဂျီတောင်
Western Union Agent ကို တင်ပေးတာ စာရွက်ဖြည့် ချက်ခ...
မြန်ပြည် ငွေလွဲ လိုသူတွေ အတွက် ဂျပန်မှာ ရှိသော တစ်...
Western Union ကနေ ငွေလွဲ တာ အရင်က သောင်း ၇၀ ရပြီး ...
မြန်ပြည် ပြည့်တန်ဆာ တရားဝင် ဖြစ်ဖို့ ထက် အမျိုးသမီ...
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ကျားသီလနှင့် နိူင်ငံသားတိုင်း မိမိ ...